Maanta, Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay bilaabaysaa tallaalka Vaccinate.Iowa.gov | KWIT
Gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa sheegay in Iowa ay bilaabi doonto talaalka shaqaalaha aasaasiga ah iyo dadka naafada ah horaanta bisha Maarso.
Ururada fulinta sharciga ee South Dakota waxay weydiisanayaan Xeer ilaaliyaha guud Jason Ravnsborg inuu is casilo.
Badhasaabka Kristi Noem ayaa isla warkan ku dhawaaqay talaadadii.
Ravnsborg ayaa wajaheysa seddex dambi oo dambi ah oo laxiriira shilkii lagu dilay Joe Boever ee degmada Hyde. Masuuliyiintu waxay sheegeen in Ravnsborg uu ku mashquulsanaa markuu garaacay oo uu dilay Boever oo marayay garabka wadada galbeed ka xigta Highmore. Ravnsborg wuxuu markii hore sheegay inuu u maleynayo inuu ku dhacay deero.
Xafiiska Gov. Kristi Noem ayaa sheegay in aysan adeegsan doonin diyaarada gobolka iyada oo usbuucan usbuucan u safraysa Orlando si ay uga qeyb gasho Shirka Waxqabadka Siyaasada Muxaafidka iyo lacag uruurinta dib loogu doorto Mar-a-Lago inta lagu jiro usbuuca soo socda.
Arbacadii, senetar ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa si rasmi ah u codsaday in baaritaan lagu sameeyo in Noem uu u isticmaalay diyaaradaha dowladda "adeegsi shaqsiyeed, olole siyaasadeed oo ka baxsan gobolka, iyo ka qeybgalka dhacdooyinka siyaasadeed ee xisbiyada."
Sioux City ’Rick Mullin ayaa si lama filaan ah ugu geeriyooday shalay subax gurigiisa oo kuyaala magaalada Sioux City. Wuxuu ahaa aabe jecel laba iyo awoowe, muddo dheerna ahaa hoggaamiye dimuqraadi ah oo u ololeeya Gobolka Woodbury, horeyna u ahaa musharrax sharci-dejin ee gobolka. Mullin sidoo kale wuxuu ahaa madaxweynaha gudiga xaflada filimada caalamiga ee Sioux City.